Roof Yakakwirira Pamusoro Tende, Car Roof Awning, Trailer Tende - Arcadia
Tine nyanzvi technical timu
Strict mhando kudzora kuongorora kuongorora 100% vanokwanisa
Ipa hunyanzvi, panguva uye mabasa anovaka.
Arcadia rakapfava padenga repamusoro tende rakagadzirwa nemhando dzakasiyana: 1.2 * 2.4M, 1.4 * 2.4M, 1.6 * 2.4M, 1.8 * 2.4M, zvakare iine yakasimba yakasimba yekumira-isina mvura zvinhu 280G polycotton, 600D diamond Oxford, 420D Oxford . Ukuru uye izvo zvinhu zvese zviri zviviri sarudzo. Ivo vanokurumidza kumisikidza uye nyore kuisa pamadziro edenga. Pasi pemba yekuwedzera pane yakasarudzika.
Nheyo yemubhedha: Kurema uremu Aluminium pepa 1mm ukobvu
Matanda: Aluminium matanda Dia 16mm
Matiresi: 6cm yakakwira dofo furo rine bvisika kavha
Rudzi rwekufamba: 450G PVC ine velcro uye zipi
Denga rewindo, bhegi reshangu zvinosarudzika
Yakaoma Shell Roof Pamusoro Tende
Arcadia Hard shell padenga repamusoro tende inogara yakasimba, yepamusoro yematrailer ako kana mota .Hard Shell Rooftop Tents inogara kwenguva yakareba kwazvo uye inopesana nechero chinhu icho nzira inokanda kwauri. Kwete chete kuti hadzina mvura zvachose, asi vanogona kupona sinou uye kubata mhepo zviri nani. Hard Shell Roof Top Tents zvakare inowanzo kuve iri nyore kumisikidza, iwe unovanamatira chaizvo kumatenga edenga, uye kana wagadzirira kupinda mukati, ingosimudza rimwe remativi uye zviri nyore uye zvakapusa, zvinotora kazhinji zvishoma pane kweminiti.
Kukura: 203 * 138 * 100CM
Shell: Washington City Offices
Mucheka: 280G polycotton
Manera Aluminium Telescopic Manera
Maitiro maviri anosarudzika
Arcadia swag yakakwana kumisasa, kushanya, kukwira kana kupera kwevhiki, ayo anokurumidza, ari nyore, akasimba, asingagone mamiriro ekunze, akasununguka 1 kana 2 munhu akapetwa, asina kuroorwa, mambo kana saizi yakapetwa. takura chivimbiso chedu chemhando yepamusoro .Iinewo PVC isina mvura pasi pevhu iyo inodzivirira dova kubuda mukati. Iyo yakagadziridzwa dhizaini ikozvino inoshandisa mhando aruminiyamu matanda kuunza imwe simba uye kugadzikana.
Mucheka: 400G polycotton, ripstop, isina mvura
Matanda: 7.9MM Aluminium pole
Zipper: SBS mhando
Pasi: 450G pvc
Matiresi yefuro: 6cm ukobvu nevhavha inobvisika
Arcadia inogadzira huwandu hweanodzokororwa husina mvura awnings, muhukuru hwakasiyana, kuti ienderane chero mota ine matenga edenga. Nenhengo dzekusarudza: mativi emadziro, mambure imba, jecha pasi nezvimwe
Kukura: sevatengi zvinodiwa
Mucheka: 280G polycotton kana 420D rinorema basa Oxford
Matanda: Alumnium ine epurasitiki clip
Guruva chifukidziro: 600G PVC
Kupisa Kutengesa 2 Munhu 4WD Vehicle Roof Pamusoro Tende Mota ...
4WD Washington City Offices Hard Shell Car Roof Pamusoro Tende Ye ...